I-Denim Two Pocket Classic Button Phansi
Phuma ebusika bakho ku-Flowy Button Down ngombala wayo omuhle we-pastel kanye ne-ink-dot echaza imininingwane. I-100% yeRayon.
Ngempelasonto yokusebenza kubalulekile, i-Two Pocket Classic Button Down iyinkinobho engasindi phansi enezikhwama ezimbili zesifuba nokulingana okungenamandla. Gqoka leli langa elifakwe i-denim elifakwe ibhulukwe, liboshwe noma njengoba linjalo ezinqolobaneni ezingathathi hlangothi. I-100% TENCEL Lyocell.
Indwangu ekhanyayo i-100% inayiloni, ukugcwaliswa kokukhanya okungelona iqiniso, ingubo ephephe kakhulu futhi enethezekile yengane yakho, kuletha okufudumele ngaphandle kokuzibamba.
Ijackethi yabesilisa enezindwangu eziyi-100% i-polyester, ukugcwaliswa kwe-goose phansi okungu-90/10, izingubo eziphephe kakhulu nezinethezekile, zinikeza imfudumalo ngaphandle kokuzibamba.
Ijakhethi yangempela yentombazane enendwangu ekhanyayo engu-100% inayiloni, ukugcwaliswa phansi okungama-90/10, izingubo ezikahle kakhulu kuwe, ikunika imfudumalo ngaphandle kokuzibamba. Hlala ufudumele futhi uvikele amanzi amaningi. Kungagwenywa ukuthi kube manzi lapho lina noma likhithika ngosuku.
Ijacket ende ende enamaphakethe amabili akhethekile, ayigcini nje ngokukugcina ufudumele, kodwa futhi ibukeka kahle. 100% polyamide
Ijackethi yangempela yabesifazane enendwangu elula 100% inayiloni, ukugcwaliswa phansi okungama-90/10, okokugqoka okunethezeka kakhulu kuwe, kunikeza imfudumalo ngaphandle kokuzibamba. Hlala ufudumele futhi uvikele amanzi amaningi. Kungagwenywa ukuthi kube manzi lapho lina noma likhithika ngosuku.
Ucezu lwezingubo lungahlukaniswa lube yizicucu ezimbili, ingxenye engaphandle ivikelekile emoyeni nasemvuleni, ingxenye yangaphakathi igcwele isitayela sangempela esingu-90, imfashini nesandla esivulekile, ingubo yonke ifudumele futhi inethezekile.
I-Long Sleeve A-Line Dress ithokomele endwangwini ethambile. Idizayinelwe ngamaphakethe ethu wakudala amabili nge-tie dye twist kanye nokuzizwa okunomoya. I-100% TENCEL Lyocell.